Banyere Anyị - Dongguan Sweetoy Electronic Co., Ltd
Ụmụaka N'ihi ya
Ụmụaka N'ihi na Ya
Di na nwunye na Games
Omenala Your Brand
Onyinye Na Cards
Sweetoy bụ nkwonkwo nke a Nchikota a integrated enterprise. Ebe i nwere ike ime ka gị imewe ezi uche na Sourcing ihe ọ bụla n'elu ahịa niile n'okpuru otu ụlọ.
Olee ihe anyị na-eme?
Tọrọ ntọala na 2013, anyị na-elekwasị anya na-okenye ụlọ ọrụ passionately. Anyị maara ihe akanyam na naanị-enye ngwa ngwa na-ere n'elu mma mmekọahụ ụmụaka na yiri ngwaahịa, ọtụtụ nanị Sweetoy. Anyị nwere onwe ha imewe na R & D otu, onye ga-enyere ka omenala gị ika si a echiche, nakwa dị ka ná mpụta ngwugwu imewe. Ị ga-gwara ọtụtụ ugboro na omenala ngwugwu na-achọ dịkarịa ala 500pcs onye ọ bụla nlereanya, ọ bụla ghara imeri anyị omenala ọrụ MOQ bụ naanị 100pcs. Ọ dịghị onye pụrụ ime ka ọ ka mma. Anyị nwere a raara onwe ya nye, otu na aka enyere gị aka ịmalite, nanị banye na ị nwere ike erekwa otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-na na na mkpa nke nduzi ma ọ bụ ndụmọdụ, anyị nwere ike inye na kwa, ọ bụ ihe niile akụkụ nke ọrụ ahụ.
Gịnị na-eme anyị na-ejere nnọọ ezi mmadụ?
Anyị mfe iji website atụmatụ na ibudata na PDF katalọgụ ga-enyere gị brows ihe niile ozugbo. Adịghị mkpa iji zipu ase na-eche ọtụtụ ajụjụ na-erite. Nanị banye na gị na ụlọ ọrụ aha na email ga-azọpụta ọtụtụ nke oge.
Award Mmeri Service - Anyị na-mpako na-enwe ike inye impeccable ozi ahịa anyị na-utịp maka ya kwa! Banye maka akaụntụ taa na-enweta ihe na-eme ka anyị na ndị ahịa. Anyị nnyefe ugboro bụ nanị ọ bụla ghara imeri Stock items-- ike ụgbọ mmiri na 1-3 Days Omenala Ihe - ike ụgbọ mmiri si kasị na 7-10 Days. Trade okwu bụ adabere na gị, EXW, FOB, CIF, DDU ... All dị. Downloads gị na saịtị - Wee na a na saịtị weebụ? Anyị downloads page nwere data faili ntanetịime na ihe oyiyi na-enyere ịnọgide na-enwe gị na saịtị.
Achọ A Multi-Category Adult Product?
Chọrọ Iji hazie Your Own Brand?
Na-eche echiche na-ebuli gị Tụkwasịnụ Chain?
Idebe An Email To Anyị Taa N'ihi One-Kwụsị Ngwọta!
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,IGBOB Mobile
wand vibrator, Strap On Dildo, Sex Ụmụaka N'ihi na di na nwunye , Nipple Sucker, Best Sex Toys For Men, Sex Swing,